Ahoana ny fomba hivarotana sy hampiroboroboana ny hetsika manaraka an-tserasera | Martech Zone
Ahoana ny fomba hivarotana sy hampiroboroboana ny hetsika manaraka an-tserasera
Alatsinainy, 29 Jona, 2015 Alahady, Jona 28, 2015 Douglas Karr
Nanoratra teo aloha momba ny fampiasana haino aman-jery sosialy hivarotra ny hetsika manaraka, ary na koa ny sasany manokana momba ny fampiasana Twitter hampiroboroboana hetsika iray. Izahay aza efa nizara a rafitra momba ny varotra hetsika.
izany infographic avy amin'ny DataHeroNa izany aza, manome antsipiriany mahafinaritra momba ny fampiasana mailaka, finday, fikarohana ary sosialy hampiroborobo sy hivarotra ny hetsikao.
Ny fampidirana ny olona hanatrika ny hetsika dia tsy ny fanaovana ilay hetsika ho mahafinaritra fotsiny, fa tokony hivarotra izany amin'ny fomba mety koa ianao. Ity infographic ity dia mitondra anao amin'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fomba fivarotana ny hetsikao amin'ny Internet, manomboka amin'ny marketing mailaka, amin'ny fanamafisana ara-tsosialy, amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Ireto misy fomba fanao tsara asongadiny amin'ny varotra ny hetsikao amin'ny Internet
mailaka Marketing - Ampiasao ny sary sy ny mailaka mamaly amin'ny finday ho an'ny taham-pisoratana anarana.
Marketing finday - Mihabetsaka ny fisoratana anarana mitranga amin'ny finday ka ho azo antoka fa hohatsaraina ho an'ny fizahana finday ny pejinao fisoratana anarana.
Search Engine Optimization - Araraoty ny pejin'ny hetsikao ho an'ny teny fanalahidy azo ampiharina ary miasa mba hiezahana haka teny avy amin'ireo tranonkala hafa mifandraika farafahakeliny 4 herinandro alohan'ny hetsikao mba hanandramana milahatra tsara azy io.
Social Media Marketing - mamorona tenifototra tsy manam-paharoa ary mandrisika ny fidirana amin'ny media sosialy alohan'ny sy mandritra ny hetsikao miaraka amin'ny hevitra vitsivitsy aorian'izany.
Tags: tsara indrindrahetsikahetsika marketingfomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny hetsikaFomba fanao amin'ny mailaka amin'ny marketing amin'ny hetsikafampiroboroboana ny varotra hetsikahetsika findaymarketing amin'ny finday hetsikafamerenana hetsikafanatsarana motera fikarohana hetsikahetsika seozava-mitrangany fomba hivarotana ny hetsikao amin'ny Internetny fomba hampiroboroboana hetsika iray amin'ny Internetmarketing amin'ny hetsika amin'ny Internetfampiroboroboana ny hetsika an-tserasera
Ny doka amin'ny finday dia momba ny tantara tsy misy fivarotana